GOLAHA WASIIRADA OO XILKII KA QAADAY TALIYIHII CIIDAMADII MILETERIGA SOMALIYA GENRAL SICIID DHEERE | Toggaherer's Weblog
Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa kulan xasaasi ah ka yeeshay xaalada dagaalada ka sii socda Magaalada Muqdisho, iyagoona kulan albaabada u xiran goor dhow ugu soo gaba gaboobay Xarunta Madaxtooyada.
Kulanka Golaha Wasiirada oo uu shir gudoominayay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Sharmaarke ayaa waxaa looga hadlay labo qodob oo ay ugu muhiimsanaayeen gar gaarka bani’aadanimada iyo ammaanka.
Wasiirka Warfaafinta Farxaan Cali Maxamuud ayaa Warbaahinta uga warbixiyay kulankaas, isagoona sheegay in Golaha Wasiirada ay iskula jeex jeexeen Xaalada dagaalada galay maalintii 8aad.
Mr Farxaan ayaa sheegay in Golaha Wasiirada manta ay xilkii ka qaadeen Taliyihii Ciidamada Milateriga Dowladda Gen. Saciid Maxamed Xirsi (Saciid Dheere) oo horay u ahaa Taliyeyaashii Ciidamada ee Dowladii Madaxweyne C/llaahi Yuusuf, waxaana sababta xilka looga qaaday oo aan la cadeyn ay la xiriirtaa habacsanaa ku yimid Ciidamadii Milateriga, isla markaana laga soo qabsaday fariisimo dhowr ah.
Taliyaha cusub ee Ciidamada Xooga dalka ayaa waxaa loo magacaabay Gen. Yuusuf Cusmaan Dhuumaal oo ahaa Taliye Kuxigeenkii Ciidamada Booliska Soomaaliyed, kaasoo howsha Ciidamada Milateriga la wareegaya.
Dowladda KMG oo aad uga liidata dhinaca Ciidamada, oo ay isku dhex yaac ka dhex muuqdaan ayaa waxay haatan isku dayeysaa inay badasho nidaamka iyo hab dhaqanka Ciidamada.
Ciidamada Dowladda oo qaarkood isku dhiibay Mucaaradka ayaa waxaa laga soo qabsaday fariisimo dhowr ah oo ay Muqdisho ku lahaayeen kadib markii ay Mucaaradka u itaal sheegteen.